800 Qodob Oo Lama-dhaafaan Ah Kuna Saabsan Xaqiiqooyin, War-bixino, Tusaalooyin Iyo Talo Soo-jeedin Oo Ka Taagan Somaliland. |
800 Qodob Oo Lama-dhaafaan Ah Kuna Saabsan Xaqiiqooyin, War-bixino, Tusaalooyin Iyo Talo Soo-jeedin Oo Ka Taagan Somaliland.
Waa maqaal xiise leh oo aan ugu talo-galay inaan ugu soo bandhigo dhacdooyin xiiso leh oo xog-warran ah dadweynaha reer Somaliland gude iyo dibadba. Qodobadan oo aad u xiiso-badani waxay si toos ah u taabanayaan sida ay isku beddeleen waxyaalo badan oo bulshdadu ay hore ugu dhaqmi jireen ama ay isticmaali jirtay laakiin wakhtiyadan danbe aad moodo inuu dhallan-rogay waayaha iyo wakhtiga is bedelayaa ama dhacdooyin kale oo inagu cusub. Runtii Kama madhna arrrimo doora oo ay dadweynuhu u dheg-taagaan, kuwaassi oo marwalba ku xeeran noloshooda. Arrimahani waxay u badan doonaan dhacdooyin dalka ku soo kordhay 25kii sanno ee ugu dambeeyey, kuwaas oo khuseeya dhinacyo kala duwan oo nolosha bulshada ah, waana kuwan ee ka bogo:
1- Adeegga ZAAD ee telefoonnada lacagaha laysugu diro oo laga hir-galiyey dalka, waxaana suurto-galiyey shirkadda is-gaadhsiinta casriga ah ee TELESOM. Adeeggaasi oo aad u afnacay shacabka reer Somaliland, miyi iyo magaalana wada gaadhay. Iyadoo si fudud laysugu gudbiyo lacagaha.
2- Ciidamada qaranka oo loo qaybiyey daroojin soo saaray haybadda iyo quruxda ciidannimo. Runtii waa astaan qarannimo oo in badan la rajaynayey, waana wax lagu majiiran karo maamulka dalka.
3- Mishiinnada kelyaha u sifeeya dadka buka oo markii ugu horreysay dalka la keenay, waxaan odhan karaa lama qiyaasi karo baahidacaafimaad ee loo qabay, iyadoo la odhan karo dad badan oo u dhiman jiray ama u cadibnaa inay kaga raysteen oo ay ducaynayaan.
4- Carruurta oo u talinaya waalidkood sax iyo khaladba.
5- Ardayda dugsiyada oo iyagu u taliya macallimiinta, isla-markaana jaan-gooya arrimaha waxbarashada ku tacaluqa.
6- Tagaasi yar-yar baahi-weyna loo qabay oo dalka laga hirgeliyey, door-weynna ka qaatay in dadweynuhu helaan gaadiid ay raacaan oo weliba qiimo jaban.
7- Baabuurta gurmadka deg-degga ah oo dalka aad loogu caawiyey.
8- Riyaha magaalooyinka oo lagu dul-qaro lambarro telefoon.
9- Ragga oo khaatiyaan ka taagan, aadna u karaahiyeystay gabdhaha dawooyinka midabka beddela jidhkooda mariya.
10- In ay dalka yimaaddeen dad ajnebi ah oo isugu jira ganacsato, dhakhaatiir, sama-falayaal, dalxiisayaal iyo kuwa kale oo aan ujeedadooda la garanynin.
11- Raxmaadkii iyo roobabkii sannadlaha ahaa oo teel-teel noqday.
12- Quruxdii iyo jamaalkii joogga dadka reer Somaliland caanka ku ahaayeen oo meesha ka baxay,
13- Xannuunada oo aad iyo aad u batay sida kansarka, macaanka, dhiig-karka iyo AIDS-ka.
14- Mowtul-qaflaha oo batay iyo dadka oo shabaabnimo ku dhimanaya.
15- Masaajidada oo tiro-beelay, balse koox-koox amma firqooyin loogu tukado.
16- Cillad joogto ah oo ku habsatay gaadiidka oo geerash walba buux-dhaafiyey,
17- Reer-magaalka iyo reer-miyiga oo aan muuqooda la kala garanayn.
18- Dhagaysigii heesaha oo aad u yaraaday iyo cajaladihii oo meesha ka baxay.
19- Meelihii bannaanaa ee carruurta yar-yar kubbadda ku ciyaari jireen oo la wada dhisay.
20- Qiime-jab weyn oo ku dhacay lacagaha qalaad ee dalka laga isticmaalo.
21- Lacago kala duwan oo si caadi ah wax loogu kala iibsado.
22- Maceeshadda oo aad u adkaatay, waana dhibaato saamaysay dhammaan wadanka.
23- Isticmaalka qaadka iyo cunistiisa oo xadhkaha goostay.
24- Dhaqankii saddexda waqti wax la cuni jiray oo midkood meesha laga saaray sababo dhaqaale darteed.
25- Shaqo-la’aan baahsan oo dalka ka taagan.
26- Caano geel iibkooda safaf dhaadheer loogu jiro.
27- Geedka Garan-waaga oo wax-ka-qabashadiisii quus ku dhammaatay.
28- Dadka oo soo baranaya faa’iidada wax-wada-qabsigu leeyahay.
29- Dhoolla-caddayntii iyo kaftankii lagu yaqaanay bulshada reer Somaliland oo shiiqaya.
30- Baabuurta oo aad u tiro batay, dhibaatooyinkooduna sii kordheen.
31- Dareenkii dadweynaha oo aan kala jeclayn dhacdooyinka dalka gudihiisa iyo kuwa dibadaha ka dhaca.
32- Dadka da’doodu dhex-dhexaadka tahay oo tiradoodu aad u korodhay.
33- Isticmaalka kelmado cusub oo dalka ku sii baahaya sida xaalad-abuur, waji-ku-macaash i.w.m
34- Dadka intooda ladan oo aad u isticmaala qalabka jimicsiga.
35- Kirada guryaha oo cirka isku shareertay.
36- Marfashyo casri ah oo nin iyo jaanni-gooni loo fadhiyo oo aan qofna qofka kale waxba weydiisanayn.
37- Raashinka iyo sharaabka dalka la keeno oo aad u tiro batay, tayadoodana aan cidiba hubin.
38- Dadweynaha oo giddi wada noqday dayn-raadis taasoo ka dhalatay dhaqaalaha adkaaday dartii.
39- Magacyada loo bixiyo carruurta dhasha oo noqday qaar aan hore loo maqal.
40- Dadkii aqoonta lahaa ee dibadaha wax ku soo bartay oo shaqo la’aan awgeed madluun ah.
41- Dharkii laga tolan jiray dawaarlayaasha oo aad u yaraaday.
42- Caanaha qasacadaysan oo noocyadoodu badan yihiin oo dalka lagu soo fatahiyey.
43- Digaagii iyo riyihii magaalooyinka lagu dhaqan jiray oo meesha ka sii baxaya.
44- Maxkamadaha oo waxoogaa horumar ah ka sameeyey dhinacyada nabadgelyada iyo dacwad-qaadista.
45- Saacadaha iyo kaalkulaytarrada [calculator] wax lagu xisaabiyo oo meesha ka baxaya.
46- Dadweynaha oo bartay inay dhistaan guryo qurux iyo bilic leh.
47- Faras-magaalaha Hargeysa oo isu beddelaya dhismeyaal dabaqyo ah.
48- Guurkii oo yaraaday arrimo dhaqaale awgeed.
49- Mahad-celinta oo bulshada aad ugu sii yaraanaysa.
50- Waddooyinka magaalooyinka iyo tuulooyinka oo askari-jiifa lagu taxay.
51- Sheekho Qosol ah : Koonfurta Soomaaliya Istaraashada waxa looga yaqaan waxa aynnu af-mariska nidhaahno.Waa hore ayaa nin reer Burco ah tegay Xamar oo aannu weligii hore u arag. Waxa uu kula kulmey nin ay saaxiib ahaan jireen, markaas ayuu ninkii maalin qado ku casuumey. Markii ay sheekadii ka bogteen, raashinkiina dhammeysteen ayaa ninkii wax casuumay u yeedhay inankii makhaayadda ka shaqeynayey oo uu ku yidhi, “istaraasho noo keen oo ah af-maris”, Kii la casuumey ayaa markiiba soo boodey oo yidhi, ‘Walley iga tahay wax kale ma cuni karo’, isagoo u qaatay in istraashadu tahay raashin kale oo loo dalbanayo.
52- Odayaashii laga faa’iidaysan jiray taariikhda iyo dhaqanka oo meesha ka sii baxaya.
53- Jaamacadaha iyo dugsiyada hoose ee carruurta lagu ababiyo aad u tiro-batay, qiimahoodana aanay danyartu awoodi Karin.
54- Cabashada waqtiga yaraaday oo dadka wada gaadhay.
55- Basaska dadweynuhu raacaan oo loogu tag-waayey inay raacaan nidaamka waddo-marista.
56- Dhuxusha oo yaraatay, qiimaheeduna cirka isku shareeray.
57- Xaaluf iyo nabaad-guur baahsan oo dalka ku habsaday, xalna aan weli loo helin.
58- Nidaamka dhigaalka dhaqaalaha ee hagbadda loo yaqaan oo dadku aad u galaan waqtigan.
59- Dhakhaatiirta da’yarta ah ee jaamacadaha dalka ka baxay iyo kuwa dibadaha ka yimaad oo wax weyn ka taray baahidii caafimaadka ee dadweynaha.
60- Farsama-yaqaannadii hore ee caanka ahaa oo meesha ka baxay iyo duul aan aqoon lahayn oo kaalintoodii buux-dhaafiyey.
61- Daawashada aflaamta musalsallada afka Soomaaliga ku tarjuman oo guri kasta aad loogu daawado, gaar ahaan dumarka iyo carruurta.
62- Korontada oo meel walba gaadhay magaalo iyo miyiba.
63- Dumarka oo marka ay dibadda u baxayaan qaata dhar wada asturan.
64- Dadka qurbaha ka yimaad oo lala sugo qorsheyaal guur iyo abuurista fursado ganacsi.
65- Hadalkii asluubta iyo akhlaaqda wanaagsan ku dhisnaa oo dhallinyaradu tuureen.
66- Madax-dhaqameedyada sida salaadiinta iyo boqorrada oo biyo-yaa-shuban noqday.
67- Buuggaagta afka Soomaaliga ku qoran oo batay.
68- Riwaayadihii la daawan jiray oo gebi ahaanba meesha ka sii baxaya.
69- Ey tiro badan oo ku tarmay jidadka magaalooyinka dalka.
70- Qashinka iyo kudaafadda oo wehel u noqday caasimadda Hargeysa, wax weynna u dhimay bilicdii magaalada.
71- Xannuunnada isku-buuqa (stress) oo aad u kordhay.
72- Cadaygii iyo dacaskii magaalada lala dhexmari jiray oo la waayey.
73- Daawooyinka madax-xannuunka oo isticmaalkoodu aad u batay.
74- Muhaajiriinta qoomiyadda Oromada Itoobiya oo saddex-jibbaarmay.
75- Socdaalkii gelista Itoobiya oo la beddelay, laguna galo fiiso sharci ah.
76- Gu’ii shaalka ahaa ee bulshada reer Somaliland dhaqanka u lahaayeen oo laga il-baxay.
77- Isticmaalka internetka oo aad iyo aad ugu faafay dalka.
78- Murankii dhulka ee laysku dili jiray oo si weyn hoos ugu dhacay.
79- Akhriska wargeysyada oo yaraaday iyo tiradooda oo aad u korodhay.
80- Tanaasulka iyo isu-dulqaadashada oo la soo baranayo.
81- Barashada diinta oo aad u xoogaysatay.
82- Ganacsiga muuska Soomaaliya ka yimaad oo aad u batay.
83- Siminnaarrada aan macnaha badan lahayn oo aad u kordhay.
84- Maxaabiista xabsiyada ku jira oo 90% yihiin dhallinyaro.
85- Miinooyinkii dhulka ku aasnaa oo dalka ka sii dhammaanaya.
86- Dumarka qaadka iibiya oo xannuuno kala duwan ku dhaceen, sababo la xidhiidha fadhiga badan iyo siigada.
87- Dameerihii biyaha dhaamin jiray oo lagu beddelay baabuur yar-yar.
88- Baahida dhakhaatiirta cudurrada maskaxda oo dalka ka taagan.
89- Cabashooyinka dadweynaha oo aad u batay, markastana ka hadlaya waxyaabaha ka maqan.
90- Baahida riigagga biyaha soo-saara oo badatay, gaar ahaan dhinaca waraabka beeraha.
91- Dalka oo dhan oo isu beddelaya beero, iyadoo meel walba dad iska ooteen oo xoolihii halis ku jiraan markii laga maanacay dhul-daaqsimeedkii.
92- Soo-saarista shidaalka iyo macdanta oo hadal-hayntoodu aad u badatay.
93- Tirada dumarka xil-doonka ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya.
94- Qabyaaladda oo aad u sii kordhaysa, dalkana ku wada baahday.
95- Noocyada mukhaadaraadka oo dalka ku soo kordhaya.
96- Raadinta caawimooyinka shisheeye iyo maal-gashiga caalamiga ah oo ciidda ka batay.
97- Tirada dumarka jilbuhu xannuunayaan oo aad u korodhay.
98- Muranka arrimaha siyaasadda ee beelaysan oo sii xoogaystay.
99- Madarasadaha xifdiga qur’aanka kariimka oo tiro beelay.
100- Xikmaddii suugaanta, gaar-ahaan curinta heesaha oo aad u daciiftay.
101- Dawarsadayaasha magaalooyinka oo halkii ugu saraysay gaadhay.
101- Sheeko Qosol ah: Nin wadaad ah oo khuruuj ku jira ayaa reer ku soo baxay, iyadoo roob sayax ahi markaasi uun soo da’ay. Reerkii buu ku leexdey. Ninkii reerka lahaa oo kadinka taagan ayuu isku sheegay. Hase ahaatee, ninkii uma uu jawaabin. Dhawr-jeer markii wadaadkii u dhawaaqay ee juuq loo odhan waayey ayuu yidhi, ‘waar kitaabka uun sayaxa iiga hoy,’ markaas buu ninkii reerka lahaa ugu jawaabey, ‘kitaab gurigiisii loo diidey Allaa sayax baday!’
102- Ganbadhkii lagu fadhiisan jiray oo laga tagay, laguna beddelay kuraas caag ah oo guri kasta iyo goob kasta yaal.
103- Shaaha oo daasado lagu kariyo, kildhigiina laga guuray.
104- Indha-kuushii dumarku marsan jireen oo dabar go’day.
105- Guryihii dhulka sibidhka laga dhigi jiray oo marmar aan haboonayn lagu beddelay oo dad badan ku jabeen.
106- Tartannadii ciyaaraha oo aad u yaraaday.
107- Ganacsigii oo laba qaybood oo keliya ku soo ururay, qolo si xalaaha wax u iibinaysa oo Illaahay ka cabsata iyo qolo maafiyaysa oo cidna aan dan ka lahayn.
108- Munaasibadihii maamuuska hadalka lagu kala dambayn jiray oo sii gudhaya.
109- Gabdhaha oo wiilasha ka batay.
110- Dadka waqtigan nool oo nacay araarta-dheer ee hadalka.
111- Bulshada oo madax iyo minjo ka siman dhaliisha dawlad kastoo jirta, dalkana wax xun uun ka sheega markasta.
112- Geela oo baabuur waaraad ah la saaro.
113- Xayeysiisyada telefiishannada dalku baahiyaan oo tiro beelay.
114- Hooyo carruur agoon ah haysata oo ilaa saqda dhexe biilkooda suuqa u fadhida.
115- Dumarka oo halgankii nolosha qoyska kaga wanaagsanaaday ragga.
116- Xaasidka iyo xinka oo dalka ku sii batay, wax lagu daweeyana aan la garanaynin.
117- Guddiyada arrimaha gaarka ah loo xil-saaro oo aan wax natiijo ah ka soo bixin.
118- Haamihii biyaha lagu shuban jiray ee tummaalladu samayn jireen oo lagu beddelay jirikaamo iyo foostooyin caag ah oo sun lagu keeno.
119- Xidhiidhintii ehelka iyo qaraabada oo aad u daciiftay.
120- Doodda iyo muranka arrimaha siyaasadda oo meel walba gaadhay miyi iyo magaalaba.
121- Ninka dowlada ama shirkadaha meel sare looga dhiibo, intaanu bilaabin shaqadaasi ayaa reerkoodu la balamayaan oo ay ku odhanayaan adiguna wax ka qabso inagana wax inooga qabo.
122- Waddooyin burbursan oo hareeraha marmar qurux badan laga dhigayo.
123- Beenta, musuqa iyo khiyaamada oo xadhkaha goostay.
124- Markhaati beenaalaha oo batay.
125- Dhegaysigii idaacadaha reer galbeedka ee suuqyada oo aad u daciifay.
126- Geeleenii qiimaha badnaa oo suqaar madhiyey.
127- Haasaawaha telefoonka oo habeenkii la caadaystay.
128- Isticmaalka mareegta FACEBOOK oo dhallinyaradu meherad ka dhigteen.
129- Jaadkii miisaska lagu dul-iibin jiray oo kolley loo rogay.
130- Saamalaylkii habeenkii oo laga badow baxay.
131- Magaalada Hargeisa waxaad ku arkaysaa laba guri oo iska soo horjeeda midna biyuhu fatahayaan midna mayd wax lagu maydho la laayahay.
132- Odayaasha gaboobay oo dantu ku kelliftay in magaalooyinka laga saaro oo miyi la geeyo si ay uga nastaan saxmadda badan iyo guuxa gaadiidka xad-dhaafka noqday.
133- Inta badan guryaha magaalooyinka oo ay ka shaqeeyaan dad Itoobiyaan ah, kuwaas oo ka shaqeeya cunto-karinta ilaalinta aqallada iyo nadaafada.
134- Shaqooyinka dawladda iyo kuwii dadweynaha oo inta badan layska dhaxlo.
135- Dumarka oo ka il-baxay sheekho-dumartii shan saacadood socon jirtay oo dhexda xidhan oo reerka masuuliyadiisa qaaday.
136- Musqulaha la kireeyo ee suuqyada oo dad badan ku reeyeen, gaar ahaan ganacsatada isla markaana aan ku diirinayo fadhi carbeedka dadka aan fadhiisan karayn ku fadhiistaan in loo sameeyo.
137- Dadweynaha oo kaashanaya dawladda waddooyin badan oo laamiyo ahna samaystay.
138- Fannaaniintii hore iyo ehelkii suugaanta ee waayadii hore aadka loo jeclaa oo aan immika wax qiime ah bulshada ku dhex lahayn.
139- Dadkii la odhan jiray Af-miishaarrada ee dadku dhegaysan jireen oo meesha ka baxay, kadib markii dadweynuhu kaalintaas wada buuxiyeen.
140- Beeralayda oo bartay faa’iidada biyo-xidheennadu u leeyihiin wax-soo-saarka beeraha.
141- Bulshada iyo dawladda oo marka dhibaato dhacdo xaaladda uun qaboojiya, laakiin aan xal rasmi ah oo dhammaystiran ka gaadhin arrinta dhacday.
142- Madarasadihii waababka ahaa ee xaafadaha laga dhex samayn jiray oo isu beddelay dhismeyaal cusub iyo carruurta oo basas guryahooda lagaga qaado subaxda hore, duhurkana dib loogu soo celiyo.
143- Madaxda dawladda oo ka shaqaysan kari la’ odayaal danahooda gaarka ah u socda oo xafiis walba taagan.
144- Idaacadaha dibadda oo batay, tartan xoogganina ka dhexeeyo.
145- Heesihii Kacaanka ee dawladdii Af-weyne oo dad badan dhegaystaan, maqalkoodana dhagaha loo wada taago.
146- Isticmaalka malabka oo aad dalka ugu soo kordhay.
147- Dadka da’doodu u dhexayso 45-50 jir oo shaqo la’aan daashatay, badankooduna ka mid noqdaan guddiyada reerkooda si ay dhaqaale uga raadiyaan.
148- Dhallinyarada inta aan balwad lahayn oo si fiican u shaqaysa, mashaariic fara badanna abuura.
149- Fannaaniinta cusub oo ka waantoobay qaadista heeso aanay lahayn oo looga horreeyey.
150- Sheekho Qosol ah: Waxa jirey laba nin oo ku saaxiib ahaa been-sheegidda, kuna caan-baxay beenta. Beentoodii markii ay badatey ayaa lagu wada-nacay. Mar dambe ayey isku waaniyeen inay ka waantoobaan beenta oo iska daayaan. Maalin iyadoo makhaayad la fadhiyo ayaa labadii nin mid ka mid ah yidhi “waar ma maqleyseen waxartii cirka ka qaylineysey saaka”? Markiiba dadkii la fadhiyey ayaa afka kaga boodey oo yidhi waar miyeydaan waxba isku faleyn, ma maantana beentaasi ayaad keenteen? Saxiibkiisii kale ayaa isagoo difaacaya yidhi, ‘miyaanay dhici kareyn in Gorgor waxar haf ka siiyo oo ay qeyliso? Haa, wey dhici kartaa bey ugu jawaabeen. Markii ay labadii isku kelliiyeysteen ayaa kii difaacayey yidhi, waar weynagii ku tashannay in aynnu joojinno beenta maxaa ku qaadey? Midda kale, bahashii beenta ahayd cirka ayaad ku laashey oo dirqi iyo tuxun ayaan kaga soo dajiyey!.
151- Waxa soo baxay duul aan dhaafayn wax kasta oo dibadda yaal, sida daasadaha iyo biraha gaboobay ee la daadiyo.
152- Baabuurta la kala iibsanayo oo lagu iibsado sida ay u kala lambar dambeeyaan, qiimahooduna ku xidhan yahay hadba lambarka gaadhiga.
153- Waxtarkii jaarka iyo isku-wareeggii bariidada oo aad u yaraaday.
154- Masaajiidii habeenka Jimcaha salliga Nabiga (S.C.W) laga akhriyey oo aad u yaraaday.
155- Dadka lugaynaya ee baabuurtu qaadi jireen oo lagu beddelay muraayadaha oo qofka la garanayo laga dallacdo iyo in xawaare lagu dhaafo.
156- Isu-dulqaadashadii dadka dhexdiisa oo meesha daciiftay.
157- Dumarka oo markasta telefoon kula hadla raggooda, lacagna weydiiya.
158- Ballamaha dadku wada galaan oo wax yar ka fulaan, balse inta badan la dhayalsado.
159- Booqashadii dadka buka oo aad iyo aad u yaraatay.
160- Kala-shakiga iyo dammiinka oo batay marka hawlaha ganacsiga la bilaabayo.
161- Dad badan oo sama-falka ay sameeyaan ku kooba qoysaskooda iyo reerahooda.
162- Niqaamka wejiga lagu daboolo oo gabdhuhu aad u xidhaan.
163- Guryo badan oo lagu daray qol gaar ah oo laga kireeyo dadka habeenkii soo jeeda.
164- Xadrooyinkii iyo Alle-barigii habeenka Jimcaha oo meesha ka baxay.
165- Qofka maskaxda iyo fikirka badan oo lagu tilmaamo qof waalan amma aan hagaagsanayn.
166- Kaba-toleyaashii oo magaalooyinka dalka ku sii yaraanaya.
167- Qurbo-joogga Somaliland oo aan nasiib u yeelan barmaajiyo dowladaha kale dadkooda dibada ku maqan u sameeyaan.lacagtooduna ay ku dhamaato biil ay soo diraan.
168- Ragga reer-magaalka ah oo aad u raadiya haweenay lacag haysata oo ay guursadaan.
169- Gabdhaha oo iyaguna la haya guurka nin lacag leh amma dibadda ku maqan.
170- Dhallinyarada badankooda oo faraha ka qaaday hammo-guur iyo inay reer dhisaan xaalad dhaqaale awgeed.
171- Dumarka oo buuxiyey kaalintii ragga ee masuuliyadda qoyska.
172- Cusbitaallada gaarka ah ee dhakhaatiirtu fadhiistaan oo kuyuu loogu jiro, gaar ahaan dumarka iyo carruurta.
173- Dhallinyaro badan oo tuug noqday oo habeenkii dadka dariiqyada ku baadha.
174- Rayiisleyaasha oo soo kordhiyey qalab iyo adeegyo casri ah.
175- Tirada dadka wax-qora oo aad u korodhay, balse 90% wax ka qora arrimaha siyaasadda oo keliya iyo dhaliilaha maamulka.
176- Shacabka oo ka bogsaday baqdintii iyo saskii ay ka qabi jireen askarta milletariga, boliska iyo nabad-suggida oo imika indhaha lagu caddeeyo.
177- Qashinka waddooyinka iyo guryaha hortooda la dhigo oo noqday wax iska caadi ah.
178- Tallaabo kastoo la qaadayo oo lacag noqotay.
179- Geesinimadii laysku ammaani jiray oo meesha ka baxday.
180- Cudurka Macaanka oo si weyn u aafeeyey dadweynaha reer Somaliland miyi iyo magaalaba, inay wax ka bartaan oo ay baadhaan cilmigiisana aaney ogolayn.
181- Isticmaalka internetka oo dad badan oo shaqeeya ka jeediya shaqo-maalmeedkooda.
182- Ragga oo marka ay guryahooda tagaan aan xaaska iyo carruurta u muujin farxad iyo weji-furnaan.
183- Baahi-wayn oo loo qabo in culimada, ganacsatada iyo dowladd ka qayb-qaataan isku-furka magaalooyinka reer-reerka loo kala degan yahay.
184- Dadka badankiisa oo aan ku xisaabtamin waqtiga iyo ka-faa’iidaysigiisa if iyo aakhiraba.
185- Dadweynaha oo marka lagu marti-qaado kulan nooca uu doono ha noqdee ku xisaabtama danta gaarka ah ee ugu jirta.
186- Dadka oo aad u bartay isticmaalka cuntooyinka waddaniga ah.
187- Dhaqashadii xoolaha iyo reer-guuraagii oo maalinba maalinta ka dambaysa sii yaraanaya, wax qorshe ah oo miiska saaran dad iyo dowladba aanay jirin.
188- Halgamayaashii SNM oo wax yar ka sii nool yihiin.
189- Saaxiibtinimadii oo isu beddeshay sida loo kala dhaqaale roon yahay.
190- Khudaarta badan oo laga beero meelaha ceelasha iyo biyo-xidheenada iyo biyaha durdurka ah.
191- Dadka qurbaha ka yimaad oo laydhka magaalooyinka Somaliland dhibo.
192- Dumarkii carruurtooda abtirsiinta bari jiray oo tuuray.
193- Biyihii dibadda laga keeni jiray oo lagu beddelay noocyo kala duwan oo dalka gudihiisa laga soo- saaro.
194- Buugaagtii yar-yarayd ee xusuus-qorka-jeebka iyo murayadihii yar-yaraa ee jeebka oo laga il-baxay.
195- Dhulkii caadiga ahaa oo dooxyo iyo jeex-jeexyo badan ka dillaaceen.
196- Dadka caddaanka ah oo aanay intooda badan ciidan ilaalin, suuqyadana si caadi ah u mara habeen iyo maalinba.
197- Shidaal wasakhaysan oo marar badan dalka loo iib keeno.
198- Kaalmaha shidaalka oo batay looguna tag- waayey in ay habeenkii saacadaha danbe shidaalka ka shubaan booyadaha xag nabadgeliyo awgeed, sida booyada oo qaraxda ama dab ka kaco.
199- Dadka badankiisa oo aad ula yaaba carruurta dibadaha ku barbaaray ee dalka lagu soo celiyo.
200- Tirada dhalashada iyo dhimashada dadka oo aad u badatay.
201- Sheekho Qosol ah: Waxa la yidhi nin dadkii hore ka mid ahaa ayaa aabihii dhintay markii dhowr cisho ka soo wareegtay dhimashadiisii, ayaa meel makhaayad ah isagoo fadhiya, ayaa niman odayaal ahi yidhaahdeen, iyagoo is xusuusinaya sidii ay caadadu ay ahaan jirtey ee shaadaliga loogu shubi jiray maytida, maanta waa maalin khamiis ah oo maytidiiba soo xaadireysa, markiiba ninkii aabihii dhintey baa yidhi aabahay nacasnimadiisii baan aqaaney, oo koley maytidaa soo caraabeysa maanta ayuu iska soo raacidoonaa.
202- Ku-takri-falka lacagta oo xad-dhaaf noqotay, gaar ahaan dhallinyarada.
203- Isku-hiilintii qabiilka iyo tolaayeydii oo meesha ka baxday.
204- Gaadiidka dawladda oo aan intooda badan darawaliintu u tudhin, lana daryeelin.
205- Feejignaantii indhaha iyo dareenka booliska ee dadka loo diray oo meeshii ka sii baxaysa.
206- Dadka qurbaha ka yimaad oo aan loo raadin sidii waayadii hore loo daydayi jiray.
207- Bisadihii guryaha lagu dhaqan jiray ee jiirka la dagaalami jiray oo dabar go’ay.
208- Birqaabkii dabka loo isticmaali jiray oo lagu beddelay malqaacad.
209- Dadka oo garashadii iyo fikirkii maskaxdooda ku soo koobay hadal-haynta waxyaabo aan faa’iido lahayn.
210- Masaajidada oo ku dhow inay 24-ka saacadoodba furnaadaan.
211- Markii ugu horreysay ee guryaha qashinka laga qaado oo lagu soo rogay inay bishii iska bixiyaan $5 doollar.
212- Sheekooyinkii mirqaanka qaadka oo la casriyeeyey.
213- Dad badan oo aan sirahooda ku furfuran meelaha lagu badan yahay sababo la xidhiidha hadalka oo telefoonnada layskaga duubo.
214- Jinaasadaha meydka oo dumarku xabaalaha u raacaan.
215- Horumarka caasimadda Hargeysa iyo gobollada kale ee dalka oo aad u kala fogaaday.
216- Xafladaha meherrada oo lagu martiqaado dad gaar ah oo isugu jira ehel iyo asxaab keliya.
217- Inta badan wiilasha reer Somaliland oo baabi’iyey hantidii ay ka dhaxleen aabbayaashood.
218- Abtigii aadka loo jeclaa oo aan hadda wax qiimo ah dalka gudihiisa ku lahayn.
219- Laaluushkii la qarsan jiray oo si caadi ah meel kasta loogu kala qaato.
220- Dumarka la qabo oo intooda badan heegan ugu jira sidii ay raggooda uga ilaalin lahaayeen guurka haweenay labaad.
221- Maxkamadaha oo ka gar-naqa dacwado aan hore loo arag, loona maqal.
222- Waysadii iyo sijaayaddii odayaashu garabka ku qaadan jireen oo la dhaafay.
223- Hilibkii solayga ahaa iyo subaggii burcadka ahaa oo meesha ka baxay.
224- Madaxtinimada iyo xilalka dawladda oo loogu tartamo in laga fara qabsado.
225- Dad badan oo sas ka qaaday isticmaalka telefoonnada dhinaca nabadgelyada darteed.
226- Waddaniyaddii iyo waxqabadkii oo dadka maskaxdooda laga masaxay.
227- Dugsiyada gaarka loo leeyahay oo iyagu ardaydooda ka iibiya dirays tolan, sidoo kalena iskuulka dhexdiisa carruurta kaga iibiya buugaagta iyo nusasaacaha.
228- Cunto-kariyeyaasha hudheellada iyo wastaadiinta guryaha dhisa oo yoomiyahoodu cirka isku shareeray.
229- Dadka oo waddooyinka iska dhex-mara oo baabuurtu iska eegaan.
230- Cunistii muqumadda oo aad u yaraatay.
231- Qareennada dadweynaha u dooda oo suuqoodu xaammi noqday.
232- Sadaqada iyo wax-bixinta oo inta badan laga baahiyo warbaahinta.
233- Isticmaalkii maahmaahaha oo aad u daciifay.
234- Muraayadaha-indhaha ee dalka la keeno oo noqday caag iyo macmal aan tayo lahayn oo suuqa lala dhex wareegayo.
235- Dhakhaatiirta oo qof kastoo xannuun ugu taga u xambaariya bac dawooyin ah.
236- Xannuunka TB-da oo hargabka la mid noqday.
237- Qaad-layaashii ku dhawaaqi jiray qiimaha oo loo beddelay cod la duubay oo sameecado waaweyn ka baxaya.
238- Joornaalladii gaboobay ee afka layskaga masaxi jiray oo laga il-baxay.
239- Sariirihii isbiriinka ahaa iyo furshaantii liifka ahaa oo lagu beddelay loox iyo buush.
240- Ciid-dahraantii dumarku weelka ku xali jireen oo aan jirin.
241- Shirarka dawladda iyo dadweynaha oo aad u batay, gaar ahaan subaxdii.
242- Buurigii raggu laaban jireen ee sida sigaarka loo cabbi jiray oo laga tagay.
243- Shaxdii raggu geedaha hoostooda ku ciyaari jireen, laguna kaftami jiray oo la dhaafay.
244- Shaqooyinka dawladda iyo dadweynaha oo inta badan qabyaalad lagu bixiyo.
245- Qaabkii geela loo gawrici jiray oo lagu beddelay qaab aad u naxariis daran oo naxdin badan leh.
246- Baahi weyn oo loo qabo cilmi iyo aqoon wax lagaga qabto dhibaatooyinka guurka oo aad u badan.
247- Cunistii baastada oo aad loo cuno oo meesha ka-sii saaraysa bariiskii.
248- Xiirashada timaha iyo madoobaynta madaxa iyo gadhka, gaar ahaan dhallinyarada oo joogto noqday.
249- Shaqooyinka oo inta badan shuruud looga dhigo qof aan balwad lahayn.
250- Dadka badankooda oo lagu dhibay qoraalka.
251- Qosol ku saabsan tuugada iyo saameynteeda: Waxa jirey oday reer miyi ah oo laba xaas lahaa, markaas ayuu maalin u iibiyey dameer ay biyaha ku dhaansadaan. Haseyeeshee, isagoo dameerkii reerihiisii ku sii wada, ayaa saddex tuug oo maalintaas wax ay xadaan soo qaban waayey ku tashadeen inay odayga dameerka ka xadaan. Saddexdii mid ka mid ah ayaa odaygii u sheekeeyey si uu u maaweeliyo, mid kalena hoggaankii ayuu ka furey dameerkii oo isaga ayaa qoorta sudhay, si aannu odaygu wax u dareemin, kii kalena dameerkii buu magaalada kula ordey si uu u iibiyo. Kii maawelinayey odayga markuu ogaadey in hawshii sidii loogu talo-galey u fushay ayuu ka leexday. Odaygii baa mar dambe dameerkii dib u jalleecay, markaas ayuu arkay ninkii dameerka lagu beddelay, dabadeedna wuxuu ku yidhi, ‘waar maxaad aheyd?’ Waxa uu ugu jawaabay, waxa igu dhacay cadho Alle oo saacadna waxaan noqdaa dameer, saacadna nin. Odaygii inta uu fajacay ayuu xadhigiisii ka furtay, reerkiisiina tagey. Muddo yar kadib, ayaa tuuladii uu dameerka ka soo iibsadey dib ugu noqday. Wuxuu arkay dameerkiisii oo summaddii uu ku iibsaday ku taal oo meel ku xidhan, kadibna intuu ku soo dhawaadey buu ku yidhi; “Waar dameer marka aad doonto dameer baad tahay, marka aad doontidna nin baad noqotaa haa!?”
252- Kabo nooc kasta leh, qiimahooduna jaban yahay oo dadka aad looga iibiyo, tayadooduna aanay fiicneyn.
253- Hooyooyinka oo habaarkii carruurtooda joojiyey, qaarkoodna cay ku beddeleen.
254- Dadka oo wada dillaaliin noqday.
255- Loollan aan kala go’ lahayn oo saacad kasta lagu jiro.
256- Telefoonnada guryaha iyo xafiisyada la dhigi jiray oo sii dabar go’aya.
257- Saacadihii gidaarrada guryaha iyo xafiisyada la sudhi jiray oo la dhaafay.
258- Godadka waddooyinka badankooda ka jeexmay oo sababta shilalka ugu badan ee gaadiidka.
259- Taariikhda iyo sheekooyinka dagaalladii SNM ku burburisay taliskii Siyaad Barre oo aan waxba laga qorin.
260- Jawaannadii raashinka lagu keeni jiray oo lagu beddelay baco.
261- Raashinkii 50-ka kg u xidhnaan jiray oo lagu beddelay 25kg iyo in xidh-xidh bakhaarrada looga iibsado.
262- Sibidhka oo kiiloo-kiiloo loo iibiyo.
263- Ciyaar-soomaaligii habeenkii la ciyaari jiray, gaar ahaan miyiga oo meesha ka baxday.
264- Hagrashada waxqabadka hufan iyo wahsiga oo aad u batay.
265- Fooxii iyo uunsigii guri kasta lagu shidi jiray oo aad u yaraaday.
266- Xabaalaha oo lagu dul sheekaysto.
267- Xeerarka la dhaqan-geliyo ee dawladda ama dadweynuhu dhexdooda samaystaan oo aan badankooda lagu dhaqmin.
268- Noocyada kala duwan ee eexda oo aad u kordhay.
269- Tirada dadka xajka taga oo sannad kasta sii kordhaysa qaali kasta ha ahaadee.
270- Tirada haweenka foosha ku dhinta oo aad u badatay.
271- Dhallinyaro aad u badan oo madaxa iyo gadhkaba cirro buuxisay.
272- Qalabka dayactirka gaadiidka oo tayadoodu aad u liidato.
273- Magacyo dawladda hoose ee Hargeysa u bixisay jidadka caasimadda oo dadkuna mooggan yahiin.
274- Baabuurta caanaha keena magaalada oo u socda sida kuwa jaadka oo kale.
275- Mukhaadaraadka oo dhallinyaro badan dishooday.
276- Qofka saldhigyada booliska lagu xidho oo marka laga daba yimaad xadhigga laga sii daayo markiiba.
277- Xafladaha dugsiyada gaarka loo leeyahay oo tiro beelay.
278- Noloshii reer-guuraaga oo la qoomamaynayo, kadib markii xoolo-dhaqashadii yaraatay isla-markaana beeraleydii lahaa meel sugan ay waxbarashada iyo caafimaadka iyagu nasiib uyeeshay.
279- Heesihii talan-taalliga ahaa oo meesha ka baxay.
280- Dadka ku barakacay magaalooyinka gudahooda oo caafimaadkoodu ka wanaagsan yahay kuwa ladan ee guryo waaweyn ku jira.
281- Qaylo-dhaan joogta ah oo mar-walba ciidanka amnigu ku sugan yahay, iyadoo tansiilaadkii lagu fulinayey aanay haysan, hadana guulo waaweyn ka soo hooya.
282- Baahi-weyn oo dalku u qabo abuurista caymiska gaadiidka.
283- Is-xushmayntii dhinaca da’da ee dadka oo sii gudhaysa.
284- Dadka is-daldala iyo kuwa is-guba oo tiradoodu aad u yaraatay.
285- Dad tiro badan oo sooma maalin kasta oo Isniin iyo Khamiis ah.
286- Da’yarta oo aan helin taariikhaha sidii Somaliland xorriyadda ku qaadatay 1960kii, midowgii ay la gashay Soomaaliya, halgankii dib-u-xoreynta iyo sababaha keenay inay madaxbannaanideeda la soo noqoto 1991-kii.
287- Isticmaalka haamaha gaasta wax lagu karsado oo dad badan la qabsan la’yihiin baqdin awgeed.
288- Dadka badankooda oo habeenkii xilli hore seexda.
289- Hablihii guryaha ka shaqayn jiray oo la waayey, una wareegay inay samaystaan makhaayado yar-yar oo shaaha lagu cabbo, laguna qayilo, halkaasina badankoodu ay guur ka helaan.
290- Rag badan oo caadaystay inay ku daba qayilaan dumarka qaadka iibiya.
291- Dadka gudaha oo culays xooggan oo dhaqaale ku haya qurbo-joogga.
292- Ragga aan badankoodu shaqaysan oo maalin kasta qayila, kharash badanna burburiya.
293- Nootaayooyinka oo ka arradan qol gaar ah oo ay fadhiistaan ama ku nastaan dadweynaha muraadadooda u qarsoon doonaya inay ku dhameytaan.
294- Sarrif-leyaasha oo cabsi la’aan badhtamaha suuqyada wadha lacag malaayiin dollar ah, kana asturin dadka dhibaataysan ee ishoodu ku dhacayso.
295- Goobihii telefoonnada laga dirsan jiray oo laga guuray.
296- Kombiyuutarrada gacanta lagu qaato oo guri kasta iyo goob walba lagu isticmaalo.
297- Kolleyada qaadka lagu iibiyo oo mid kasta magac gaar ah far waaweyn lagu dul qoro oo qosal leh.
298- Is-dhexgalkii ragga iyo dumarka oo aad u batay.
299- Caashaqa iyo jacaylka telefoonka ee da’yarta oo ciidda ka batay.
300- Gabdho tiro badan oo bartay cunista qaadka iyo cabbista badeecadda.
301- Hudheello rag iyo dumar badeecadda lagu wada cabbo.
302- Sheeko Qosol ah: Waxa jiray magalaada Hargeisa nin caruur badan oo maalin ayuu biilkoodii ku adkaaday. isagoo yaabban ayaa waxa uu arkay nin sii socda oo reerkooda ah oo ladan ninkii buu soo daba-qaaday oo is yidhi aad la hadashid oo aad wax waydiisatid ninkan wax haysta ee sii-socda, mar-kasta qof ayaa salaamayey oo uu la istaagayey ninkii bilaa masruufta ahaa wuu iska samray waanu iska daba-socday markaasuu ninkii ladnaa masaajid galay, isna wuu ka daba-galay, markii salaaddii la tukaday ayuu kii baahnaa soo baxay si aanu ninku uga hor bixin. Ninkii ladnaa salaad badan oo sune ah ayuu tukanaayey marna qur’aan ayuu akhrisanayey. Kan miskiinka ahi kolba daaqad buu ka eegayey markuu saacado dhan ku jiray ayaa ninkii baahnaa samirkii ka dhamaaday intuu iskaga dhaqaaqay buu yidhi “waxani salaad maahee waa kaga xaari”. isagoo u jeeda in uu maanta ninkaasi waxba ka helayn waxna looga qorin.
303- Casarkii oo dadku laba u kala baxaan, niman wadaado ah oo khamiis gaaban xidhan, garabkana cumaamad ku haysta, gacantana kitaab ku ista oo intaasi faqaaya iyo kuwa gidaar la fadhiya qayilaad.
304- Dhakhtaradii iyo neeras-tii oo khaatiyaan ka jooga dadka soo siyaaranaya dadka jiifa cisbitaalka looguna taag waayey saacado goon ah ay soo booqdaan.
305- Laba kooxood oo la kala ilaalin jiray oo manta wada shaqaysta kuwaasi oo ah Ganacsatada iyo Ciidanka.
306- Geedkii cambe-babaayga ahaa oo faraha laga qaaday.
307- Hablihii yar-yaraa oo marka waano u-jeediya la is-yidhaahdo cay xun kuugu jawaabaya.
308- Dumarka qaadka iibiya oo marka wadaadadu ku yidhaahdaan lacagta qaadka lagama tagi karo xajka ay gacanta iyo dhabanka isku hayaaan.
309- Jaarkaaga kugu xiga oo aan la ogayn hadii ay seddex cisho waxna cunin waxna cabin.
310- Dadkii waa-waynaa ee kursiga looga kici jiray oon looga kacayn.
311- Daka reer Somaliland oo u naxaya somalida koonfurta. Fahmayna halka ay sirtu ka qudhuntay waxna u tari karaynin.
312- Macalimiintii Tababarnaa oo sida lagu helaa adag tahay.
313- Dhalinyaradii ciyaartooyga ahaa ee subaxda hore alamiitada samayn jiray oo meesha ka baxay.
314- Wufuud qulqulaysa oo dibadda ka imanaysa oo barigii hore la eegi jiray inay wax tar la yimaadaan oo la iska ilaaway.
315- Ciidankii la bari jiray socodka dheer, gaajada iyo haraadka inay la qabsadaan iyagoo qalabkoodii dhabarka ku sita ee habsami isku daba gali jiray ee dumarkuna u mashaxaradi jireen iyagoo dirays isku wada eeg xidhan oo aan jirin.
316- Mashaxaradii dumarka oo iska yaraatay.
317- Anteenooyin badan oo buuraha laga taagay, dadkuna ka cabsi qabaan in xanuuno ka dhashaan.
318- Baytariyo iyo Taayiro aan tayo lahayn oo wadankii lagu soo daabulay.
319- Maahmaahdii ahayd qunjar socde qodaxi ma muddo oo meesha ka baxday.
320- Taraafigii Reer Somaliland oo ka daalay farahana ka qaaday inaanay darawaliintu hoonka ku qaraacin madaxtooyada iyo cisbitaalada.
321- Marka dadku wax iibsanayaan wax kasta ha noqdee ay inanka wax-iibinaya mar kaliya la wada hadlaan si uu toban qalbi iyo toban maskaxood leeyahay oo kale.
322- Hilibka oo aad loo cuno, Bari-dhow hadaan wax laga qaban laga yaabo in ay dabar go,aan xoolaheenu.
323- Wadaagii Raashiinka oo meesha ka baxay.
324- Waxaad arkaysaa dad sita seddex ama afar mobile oo dadka is tusaya si loo moodo in uu yahay nin masuul ah oo hawlo wada.
325- Dowladda iyo haayadaha madaxa-bannaan iyo kuwa ajanabiga oo marka laga qaado xilka uu hayo naftiisa kala kulma qoomamo iyo warwer xanuun ku keena.
326- Waxa soo baxay in wasiirada iyo maayirada dad badan daba ordaan iyagoo doonaya in ay arrin u sheegaan taasi haddii ay u suurtoobi waydo dumarkooda ayey guryaha ugu tagayaan oo ay u sheegaan muraadkooda.
327- Ganacsatadii nooc kasta ha ahaadaane oo joojisay daynka gabigiisaba.
328- Faraawilka caagga ah oo dalka ku soo batay.
329- Hangoolkii oodda lagu qaadi jiray, amma lagu xarragoon jiray oo dabar go’ay.
330- Tirada jaraa’idka ka soo baxa caasimadda Hargeysa oo aad u badatay, wax keliyana lagu wada qoro.
331- Mulkiilayaasha guryihii gaboobay ee faras-magaalaha oo dhaqaale xooggan ka helay iibkooda.
332- Maahmaahdii ahayd dumarka been baa lagu soo xero-galiyaa, runna waa lagu dhaqaa oo shiiqday.
333- Rag iyo dumar gelinka hore waalan, lagana baqdo oo gelinka dambe caadi noqda oo qaad ku urursada Waalidaasi, galabtii markay qayilaana caadi noqda.
334- Kabihii reer-miyiga loo toli jiray oo laga il-baxay.
335- Waalidiinta oo badankoodu aad uga werwera xaaladda carruurtooda qaan-gaadhka noqda, gaar ahaan wiilasha.
336- Wadhafkii oo laga baxay.
337- Dhegaysiga qaar ka mid ah barnaamijyada ka baxa idaacadaha oo aad loo xiiseeyo
338- Weelka cuntada ee dumarku murdin jireen oo meesha ka baxay.
339- Feenashadii lafaha hilibka oo la iska daayey.
340- Calaamadaha digniinta sida cabbista sigaarka oo lagu dhejiyo gidaarrada xafiisyada iyo guryaha.
341- Inta badan dhallinyarada dalka oo dhoof madax-maray.
342- Siyaarooyinkii la dhigi jiray oo aad u yaraaday.
343- Booliskii dhar-cadda la odhan jiray oo aan dalka ka shaqayn.
344- Dadka badankiisa oo indhaha ka qarsada duruufaha qallafsan ee waddanka jira.
345- Barashada diinta oo noqotay il-dhaqaale oo macaash badan laga helo.
346- Culimada oo siyaabo kala duwan u qaata cummaamadaha.
347- Beeralayda oo wax-soo-saarkooda u adeegsada sun aanay aqoon u lahayn waxyeelladeeda.
348- Xaaladda dalka oo ku socota in ay hilibka cunaan oo keliya dadka lacagta badan haysta, maadaama qiimihiisu cirka isku shareeray.
349- Odayaashii ka qayb-galay dagaalkii labaad ee adduunka oo dhammaaday.
350- Dumarka oo uunsigii ay lugaha dhex galin jireen iska dhaafay.
351- Noqoshada caaqil, suldaan, boqor iwm oo aad u fududaatay, kuna xidhan lacag aan badnayn oo xaflad caleemo-saar lagu dhigto.
352- Caydii diinta, malaa’igta, Nebiga (NNKHA) iyo Illaahay oo aad u yaraaday, kadib markii Guddiga Wanaag-farista iyo Xumaan-reebistu suulinta arrintaas xil weyn iska saareen.
353- Sheeko Qosol ah: Waxa jirey nin mar-dhoof ahaa oo tagay dalka Mareykanka. Maalinbaa waxa qado ku casuumey dad ay asxaab ahaayeen. Qadadii markii ay cuneen, ayaa waxa loo keenay macaan Jelley la yidhaahdo, kaasi oo la qaboojiyo oo marka talaajada laga soo saaro ee miiska la dhigo ruxma oo yar gariira, markaasuu yidhi ninkii ma cunaayo, waxayna ugu jawaabeen waxa uu leeyahay faytamiin badan ee cun, dabadeed waxa uu ku yidhi “haddii uu nafaqo leeyahay isaga ayaa isku joogi lahaa ee iga daaya”.
354- Marxabbaysiis iyo raalli-gelin aan hore loo arag oo loo hibeeyo dadka wax haysta.
355- Maamulka dhulka oo badankiisu ka baxay gacanta dawladda.
356- Telefoonnada gacanta oo lagu soo kordhiyey adeegyo casri ah oo aan hore loo arag.
357- Aroosyadii baabuurta badan magaalooyinka lagu soo wareejin jiray oo laga baxay.
358- Diiwaangelinta dadka geeriyooda oo meelo badan laga hirgeliyey.
359- Dumarka oo ka badow-baxay xidhashada googoraddii qarada weynayd ee dulaca lahayd.
360- Ardayda jaamacadaha ka qallin-jabiya oo shaqo la’aan guryaha iyo gidaarada buux-dhaafiyey.
361- Kutubka qur’aanka gaboobay ee jeex-jeexmay oo dib loo cusboonaysiiyo.
362- Dab-damis yaraan baahsan oo dalka ka jirta.
363- Doodaha idaacadaha ka baxa oo dadku naceen.
364- Baabuurtii Landroverka la odhan jiray ee berigii hore aadka loo jeclaa oo laga tagay.
365- Goobaha lagu duubo qur’aanka, axaadiista iyo muxaadarooyinka oo kuyuu loogu jiro.
366- Dhallinyaro badan oo ku lebbista surwaal badhyaha lagu xidho.
367- Qallin-qori (pencil) tayadiisu aad u liidato oo dalka loo iib keeno.
368- Dadka waalan oo magaalooyinka si sibiq ah uga baxa, kadibna dhibaatooyin badan la kulma.
369- Adeegyada dadweynaha ee hay’adaha dawladdu qabtaan oo fulintooda lagu xidho qofka madaxda ah sexeexiisa oo keliya.
370- Booqashadii bukaanka oo aad u yaraatay.
371- Cudurrada jinka oo aad iyo aad ugu soo batay dalka, gaar ahaan dumarka.
372- Goobaha sawirka lafaha ee gaarka loo leeyahay oo tiro beelay magaalooyinka waaweyn, iyadoo dhibaatadooda caafimaadna ay aad u balaadhan tahay.
373- Baaskiiladihii la kirayn jiray ee carruurtu ku ciyaari jireen oo laga guuray ama dhif ah magaalooyinka.
374- Is-xilqaamiddii arrimaha danta guud oo yaraatay.
375- Kirishboydii baabuurta oo aad u yaraaday.
376- Marfashyada koox-kooxda loogu qayilo oo batay.
377- Buuggaagtii xusuuq-qorka ee gacanta lagu qaadan jiray oo la dhaafay.
378- Dhimista miisaanka jidhka oo la soo baranayo.
379- Ganacsiyada la wada leeyahay oo u badan qoysnimo amma kooxnimo aan wax shuruuc ah lahayn.
380- Jaadkii la taqsiimi jiray oo lagu beddelay in biyaha uun la raaciyo.
381- Qayilaadda oo noqotay halka ugu weyn ee raggu waqtigooda qaaliga ah ku lumiyaan.
382- Dadka badankooda oo aan u aabbo-yeelin waxa calooshooda galaya.
383- Xaaladda qaad-cunista oo ku socota in sida dalka Yemen rag iyo dumar meel lagu wada qayilo.
384- Calool-istaaga iyo isku-buuqa oo dadka ku sii badanaya.
385- Baabuurtii la odhan jiray Siisowga iyo Niisaanka oo sii dabar go’aya.
386- Wiilasha farmasiiyada iibiya oo dadka dawooyinka u qora.
387- Subaggii saafiga ahaa oo dalka ku sii yaraanaya, aadna u qaaliyoobay.
388- Nabsigii raagi jiray ee dadka laga galo oo hadda soo deg-dega.
389- Faalkii iyo tusbaxii la rogi jiray oo laga guuray ama yaraaday.
390- Dilkii oo aad u yaraaday.
391- Waddaniyadda dadka oo duruufaha dhaqaale mugdi weyn geliyeen iyo hadalo kaftana oo ay ka mid tahay dantaada ka raac iyo maxaynu cunaa oo dadka dhexdiisa ku badan.
392- Timirtii caammada la odhan jiray oo aan jirin oo lagu bedelay timiro kale oo jaad jaad ah oo aad u macaan aadna u qurux badan.
393- Baanboydii durbaankooda meelaha fog laga maqli jiray oo aan waqtigan jirin.
394- Beeralay badan oo wax-soo-saarkooda uga faa’iidaystay mashaariicda iyo tababarrada hay’aduhu siiyaan.
395- Ganacsatada reer Somaliland oo ku guuldarraystay inay kalluunka iyo milixda u iib geeyaan dalka Itoobiya.
396- Baabuurtii xammuulka dadweynaha ee badeecadaha ka soo qaadi jiray dekedda Berbera oo ay meesha ka saareen gaadiid waaweyn oo ganacsatadu gaar u leeyihiin.
397- Sigaar noocyo kala duwan leh, aadna u tiro badan oo dalka la keeno.
398- Qaar ka mid ah basaskii dadweynaha ee qaxootiga lagala soo noqday oo weli shaqeeya.
399- Gabayadii iyo suugaantii dhegaysigooda la jeclaa oo aad u yaraaday
400- Shaqooyinkii dadka shaqaalaha ah saacadaha loo xisaabin jiray oo meesha ka baxay.
401- Dhismayaasha quruxda badan iyo fooqyada tirada badan ee dalka la dhisay oo ka arradan wajahado baabuurta la dhigto.
402- Badeecadaha ganacsiga oo aan lahayn qiimo go’an, qof kastana wixii la doono laga siiyo.
403- Sheeko Qosol ah: Bari hore ayaa nin reer miyi ahaa nabar madaxa ka gaadhey, isagoo la dagaalamaya nin kale, dabadeed wuu suuxay, waxaana u suurtoobey ehel-kiisii in ay si deg deg ah u soo gaadhsiiyan cusbitaalka Hargeysa oo markaas uun la dhameeyey dhismihiisii, hawshii caafimaadkuna ay bilaabantay, qalab casri ahna waa yaaley. Ninkii markii uu habeen iyo maalin koomo ku jirey ayuu goor fiid ah oo dhakhtaradii kormeer ku marayaan waadhkii uu jiifay ayuu soo baraarugey, waxaana uu u qaatey in uu akhiro joogo oo dib u soo nolaadey. Markiiba waxa uu ku indho-daraandarey uuna la yaabey waxyaalo aanu hore u arki jirin, sheekana ku maqli sida; laydhka, shaqaalaha ajanaabi ah oo dad cadcad ah oo dhar wada cad xidhan, sariiraha iyo qalabka cusbitaalka ee meesha yaaley, markiiba dhakhtaradii baa u yimid, mid ka mid ah oo af-soomaali in yar ka yaqaaney ayaa ku yidhi waryaa adiga magacaa? Waxana uu ugu jawaabey “ifkii waxa ley odhan jirey Maxamed”!!!.
Qalinkii: Rashiid Sulub